Haddii Muuse Biixi diido inuu soo dhaweeyo Farmaajo yaa wax ku waayaya: Warbixin - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Haddii Muuse Biixi diido inuu soo dhaweeyo Farmaajo yaa wax ku waayaya: Warbixin
Waxa maalmahan soo baxaya warar sheegaya in madaxweynaha Somaliya laga filayo inuu Hargeysa tago isaga oo uu la socdo raiisal wasaaraha Itoobiya oo raba inuu helo Somali xoogan oo qaybteeda ka qaadata amniga geeska Afrika, taas oo u fiican hindisaha Cabi Axmed iyo Somaliba.
Inkastoo horjooge Muuse Biixi uu cuqdad iyo xumaan weyn u qabo Koofurta dalka, haddana tuunbadu ugu jirto maadaama uuna jirin culays sidaas u weyn oo saaran aan ka ahayn inuuna ictiraaf ku haysan magaca Somalilaan, waxba kama qabo inuu yaso Farmaajo.
Su’aasha aad is weydiin karto ayaa ah yaa wax ku waayaya.
Waa ta koowaade Farmaajo inuu tago Hargeysa waxay faaiido ugu jirtaa Soomaali oo dhan welibana u dhaafo gobolada kale sida Awdal oo dadka ku nool boqolkiiba 99% marnaba ogoleyn in Somali kala go’do.
“Waxaan leehay Farmaajo hore u soco una diyaar garow waxaad Hargeysa kala kulanto ayay tiri Marwo Fowsiya Xaaji Yuusuf.
Markaa booqashada Farmaajo ee Hargeysa waa mid xataa dadka jooga Hargeysa iyo Burco ee aan hadli karin soo dhaweynayaan, iyagana ka dulqaadaysa culeysyo maamulku saaray sida xoriyada hadalka.
Waa ta labaade waxa ka xumaanaya booqashada Farmaajo ee Hargeysa wadamo waaweyn sida Ingiriiska iyo kuwa uu ku adeegto sida Kiiniya, Imaaraadka maadaama meesha ka baxayso tiirka ku gabashada maamulada si danahooda uga fushadaan Somaliya.
Waana kuwa wada cadaadiska ugu weyn ee aan Somalidu u jeedin. Waxa dalalkaas ay wataan koox yar oo horjooge Muuse Biixi ugu horeeyo oo sheegta mujaahidiin, lama garan karo cida ay ku shahiideen.
Markaad isku miisaanto waxa kuu soo baxaya in horjooge Muuse Biixi iyo kooxdiisa taageerta ay khasaare weyn ku jiraan waayo waxay raadinayaan ictiraaf lagu yiri Muqdisho u doonta, ayna ku yiraaheen kuwii ay isku halaynayeen.
Markaa haddii Farmaajo tegi waayo Hargeysa waxay u fududeynaysaa in saaxiibada maamulka Somalilaan ku qasbi Karin inuu waqtiga ku lumiyo sheekada wadahadalka waxay ugu yeeraan “Somaliya iyo Somaliland” oo ah magac buga oo aan jirin. Waxase Muuse Biixi ilaaway inuu luminayo warka madaxdiisa xilli boqolkiiba 90% dadka ku nool Hargeysa iyo Burco raali ka ahayn maamulkiisa, farahana ka qaadeen sheekadii goosadka.
Fiiri gaara: ARAABINEWS kama masuula aragtiyada ay noo soo direen akhristeyaasha sharafta leh waxayna u gaartahay qoraaga ku saxiixan. Haddii aad jawaab u hayso qoraalkan fadlan noogu soo hagaaji iimaylka araabimedia@gmail.com